Okwukwe na nchegbu anaghị agakọ
Nyefee nchegbu gị n’aka Jizọs ma nwee okwukwe na Ya.
Echegbula onwe gị banyere ihe ọ bụla, mana n ’ọnọdụ ọ bụla, jiri ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike, jiri inye ekele mee ka Chineke rịọ arịrịọ gị. Ndị Filipaị 4: 6-7 (NIV)
Mmanụ na mmiri adịghị agwakọta; ma okwukwe ma ọ bụ nchegbu.
Ọtụtụ afọ gara aga, ọrụ di m nọ n'ihe ize ndụ. Lọ ọrụ Clay nọ na-ahazigharị ya. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ nọ na-ahapụ ọrụ. Ọ nọ n'ahịrị ka a chụọ ya ọzọ. Anyị nwere ụmụ atọ, ọ dịkwabeghị anya anyị zụtara ụlọ ọhụrụ. Nchegbu nọ na-efegharị dị ka igwe ojii nke dị n’elu anyị, na-egbochi ìhè anyanwụ. Anyị achọghị ibi n’egwu, n’ihi nke a anyị kpebiri inyefe Jesu ihe anyị na-eche ma nwee okwukwe na Ya.
N’oge na-adịbeghị anya, a nwalere okwukwe anyị ọzọ mgbe m kpebiri ịla ezumike nká. Mụ na Clay mere mkpebi a tara akpụ mgbe anyị kpesịrị ekpere ruo ọtụtụ ọnwa. Fewbọchị ole na ole ka m lara ezumike nká, friji anyị mebiri. N’izu na-eso ya, anyị ga-azụta taya ọhụrụ. Ekem ufiop ye ofụm ufọk nnyịn ama akpa. Nzọpụta anyị agbadaala, mana anyị ji n'aka na Jizọs ga-egbo mkpa anyị. Ihe na-eme, ma anyị anaghị echegbu onwe anyị. Ọ abịawo n'ihu anyị ugboro ugboro, n'oge na-adịbeghị anya na-enye m ohere ide ihe na oge m ga-eji mee ihe maka di m. Anyi na-aga n’ekpere ma mee ka Ọ mata mkpa anyị ma na-ekele Ya mgbe niile maka ngozi Ya
Isi 1: Mkpebi na mkpebi ndụ